Ivory Coast oo wasiir hore 20 sanno oo xarig ah ku xukuntay - BBC News Somali
Ivory Coast oo wasiir hore 20 sanno oo xarig ah ku xukuntay
Image caption Qariidadda dalka Ivory Coast
Hubert Oulaye, oo horay dowladda Ivory Coast wasiir uga soo noqday ayaa waxaa lagu xukumay 20 sanno oo xarig kaddib markii lagu helay inuu ku lug lahaa dilka 18 qof sannadku markuu ahaa 2012, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 7 qof oo ka mid ahaa nabad ilaaliyayaasha Qaramada Midoobay.
Mr Oulaye ayaa waxa uu wasiirka howlaha guud u ahaa madaxweynihii hore ee waddankaasi, Laurent Gbagbo.
Waxa uu go'aankan ay gaartay maxkamad ku taalla magaalada Abidjan ku tilmaamay inay tahay xukun siyaasadeed oo aanan caddeyn loo hayn.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee waddanka Ivory Coast, Mireille Kouassi, ayaa sheegtay in Hubert Oulaye uu maalgeliyay si kacdoon looga sameeyo galbeedka waddanka.
Waxa ay ku baaqay in xabsi daa'in madaxa loo galiyo Mr Oulaye iyo ninka la eedaysan ee lagu magacaabo Maurice Djire, waxa ayna sheegtay in qofka ka dambeeya weerrarka uu mararka qaar ka khatar badan yahay kan soo abuubula.
Qareennada Mr Oulaye ayaa sheegay in ay racfaan ka qaadan doonan xukunkaasi.
Weerarka la qaaday bishii June ee 2012-kii ayaa dhacay xilli Ivory Coast ay iskudayaysay inay ka soo kabsato qulqulatooyinkii xigay doorashadii madaxtinimada ee 2010, markaas oo madaxweynihii xilka markaa hayay uu diiday inuu aqbalo in doorashada uu kaga adkaaday hogaamiyaha Ivory Coast ee xilligan, Alassane Ouattara.